An-kitsim-po : “aoka tsy hiandry toloran-dava” | NewsMada
An-kitsim-po : “aoka tsy hiandry toloran-dava”
“Aoka tsy hiandry toloran-dava ny vahoaka, indrindra fa ny Afrikanina”. Izay ny hafatry ny mpahay toekarena amerikanina iray, Gary Becker. Zatra mangataka sy miandry toloran-dava ny vahoaka afrikanina, antony iray lehibe tsy mampandroso ny firenena afrikanina maro. 50 na 60 taona aorian’ny fahaleovantena, mbola betsaka ny latsaka lalina ao anaty fahantrana, anisan’izany i Madagasikara.
Raha i Afrika manokana, maro ny efa fanakianana ataon’ireo tany tandrefana. Iaraha-mahalala izao ny fanilihana ireo mpitsoa-ponenana ataon’ireo mpitondra tandrefana, anisan’izany ny filohan’i Etazonia, Donald Trump. Nomen-tsiny indray izy amin’ny fanakianana nataony sy ny voambolana nampiasainy.
Tonga izao ny fotoam-pifidianana, mandeha sahady ny fampanantenana isan-karazany hanondrotana ny fiainam-bahoaka, ataon’ireo mpanao politika. Efa hita taratra izany na mbola tsy manomboka akory aza ny fampielezan-kevitra. Ny vahoaka mitantara ny mahazo azy; ny mpanao politika mampanantena ny zavatra ho azy. Tsy zava-baovao izany fa efa nisy hatramin’izay.
Koa tokony hahalala ny tantara ny rehetra, ilaina ny fanjakana ary tsy maintsy misy ny mpitondra. Fa manomboka amin’ny olom-pirenena tsirairay, ny any anivon’ny fokontany sy ny kaominina, tokony hamaritra ny fampandrosoana ao aminy sy hiasa ho an’izany.